कोरोनाको त्रास : थकित शरीर, रातभरको यात्रा – The Public Today
विजय कुमार सिंह जेठ २१, २०७७ ५:३१ am
जेठ २१ गते : जाजरकोट , रुकुम पश्चिम र डोल्पाका सर्वसाधारण थातथलो फर्कने क्रममा हप्तौं हिँड्नुपरेको छ । केही स्थानीय तहले यातायातको व्यवस्था गरे पनि गाउँसम्म सवारीसाधन नपुग्दा उनीहरु अहिले समस्यामा परेका छन् । भारत तथा देशका ठाउँबाट फर्किएका मजदुर तीन हप्तासम्म हिँडेर आउनुपरेको पीडा सुनाउँछन् ।
दिनको चर्को घामले हिँड्न नसकेको हुँदा रातभरि हिँड्न बाध्य भएको जुनिचाँदे गाउँपालिका–४ का दलवीर नेपालीले बताए । उनले भने, “अर्काको भूमिमा मर्नुभन्दा बरु आफ्नै भूमिमा मृत्यु भए आफन्तले त देख्लान् ? दिनरात गरेर हिँडिरहेका छौँ ।”
गाउँमा गएर हामी क्वारेन्टिनमै बस्ने भन्दै अर्का गोर्खे नेपालीले भने, “केही व्यक्तिले बदमासी गरे भन्दैमा हामीलाई पनि सोहीरुपमा हेर्नु भएन । हामीलाई पनि आफू बाँच्ने र अरुलाई बचाउने विवेक छ ।”
अर्काको भूमिका छिछी र दुर्दर गर्दै कति दिन बस्ने ? रामबहादुर रावतले भने । उनले आँखाबाट आँसु खसाल्दै भन्नुभयो, “कसलाई रहर हुन्छ आधा महिना हिँडेर आउन ? आफैँ भन्नुहोस् न हाम्रो शरीर कस्तो भएको छ, हामी कति दिन भोकै हिँडिरहेका छौँ, यो रहर हो ?”
स्थानीय सरकारले निर्माण गर्ने सडक तथा अन्य निर्माणको काममा डोजर प्रयोग हुँदा कामविहीन भएको उनीहरुको भनाइ छ । जुनिचाँदे गाउँपालिकामा कोरोना जाँच गरेर फर्कंदै गरेको स्वास्थ्य सेवा कार्यालयका चिकित्सक डा भूपेन्द्रप्रकाश मल्लले भने, “ काम गर्ने तरिका र कार्यशैलीले गर्दा हाम्रा गरिब जनताले यसरी दुःख पाउनुपरेको छ ।” – रासस